sida loo maareeyo akoonno badan oo github ah isla mishiinka
Ugu Weyn Ee bash Sida Loo Maareeyo xisaabaadka badan ee GitHub isla Mashiinka
Sida Loo Maareeyo xisaabaadka badan ee GitHub isla Mashiinka
Hadaan nahay horumariyayaal waxaan caadi ahaan ku qasbanaaneynaa inaan kuwareegno akoono badan oo GitHub isla mashiinka ah. Tusaale ahaan waxaan u haynaa koontadayada 'GitHub' shaqsiyadeed oo u gaar ah mashruuc noo gaar ah ka dibna koonto kale oo GitHub ah oo aan u adeegsano mashruuca macmiilkayaga.
Maqaalkani wuxuu bixinayaa tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo dejiyo oo loola shaqeeyo xisaab badan oo GitHub isla mashiinka ah.
Maamul Xisaabaadyo badan oo GitHub ah
Xaaladdan dhexdeeda waxaan ku abuuri doonnaa laba koonto oo GitHub oo kala duwan isla mashiinka ka dibna aan u kala beddeleyno labada.
Abuur Furayaasha SSH
Marka hore, waxaan u baahanahay inaan u abuurno furayaashayada gaarka loo leeyahay / kuwa gaarka loo leeyahay ee SSH shaqsiyeed koontada
Waxaan tan ku samayn karnaa annagoo ku fulinayna amarka soo socda terminal:
$ ssh-keygen -t rsa -C 'email@gmail.com' -f 'id_rsa_personal'
Cinwaanka emaylka kor ku xusan waa midka aad u isticmaasho inaad ku gasho koontadaada GitHub shaqsiyeed.
Markii lagu weydiiyo goobta si aad u keydiso furayaasha, aqbal meesha caadiga ah adoo riixaya gala. Lammaane furaha gaarka loo leeyahay / dadweynaha ayaa laga sameeyay goobta ssh ee loogu talagay ~/.ssh/.
Furayaasheena gaarka ah ee SSH waa:
~/.ssh/id_rsa_personal.pub iyo ~/.ssh/id_rsa_personal
Marka xigta, waxaan u abuureynaa furayaasheena gaarka loo leeyahay / gaarka ah ee SSH macmiil koontada:
$ ssh-keygen -t rsa -C 'email@company.com' -f 'id_rsa_company'
Cinwaanka emaylka kor ku xusan waa midka aad u isticmaasho inaad ku gasho koontadaada macmiilka GitHub.
Amarka kor ku xusan wuxuu abuuraa furaha macaamiisheena SSH oo ku yaal ~/.ssh/.
Furayaashayada SSH ee furaha u ah waa:
~/.ssh/id_rsa_company.pub iyo ~/.ssh/id_rsa_company
Kudar Fureyaasha SSH si aad u tixgeliso Xisaabaadka GitHub
Soo gal koontadaada 'GitHub' ee gaarka ah kuna dar id_rsa_personal.pub fure dadweynaha
Marka xigta, soo gal koontadaada macmiilka GitHub oo kugu dar id_rsa_company.pub furaha dadweynaha.
Haddii aadan hubin sida loo sameeyo tan, ka dib akhri rakibi Git iyo Abuur Furayaasha SSH .
Cusboonaysii Faylka isku xidhka SSH
Faylka isku xidhka SSH wuxuu deganyahay ~/.ssh/. Haddii aadan arkin faylka isku xirka, ka dibna abuuro mid:
$ cd ~/.ssh/ $ touch config
// Creates the file if not exists $ nano config
// Opens the file for editing
Kudar astaamahaaga kala duwan ee GitHub feylka qaabeynta SSH:
# Personal account Host github.com-personal HostName github.com User git IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_personal # Company account-1 Host github.com-company HostName github.com User git IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_company
Ka diiwaangeli furayaasha SSH wakiilka ssh
Ku bilow wakiilkaaga ssh adigoo ordaya eval '$(ssh-agent -s)'.
Kadib ku dar furahaaga SSH wakiilka ssh:
ssh-add ~/.ssh/id_rsa_personal ssh-add ~/.ssh/id_rsa_company
Tani waxay ka diiwaangelin doontaa furayaashaaga SSH ssh-wakiilka mashiinka ku jira.
Kaliya Hal Fure SSH oo Firfircoon oo kujira ssh-agent markiiba
Hadda oo aan u abuurnay furayaasheena SSH shaqsi ahaan iyo shirkad ahaaneed oo aan ka diiwaangelinnay wakiilka ssh-ka, waxaan hadda si fudud ugu kala beddeli karnaa labada xisaabood ee GitHub isla mashiinka.
Waxaan u baahannahay inaan hubinno inaan haysano kaliya furaha SSH ee lagu daro wakiilka ssh markiiba.
Tusaale ahaan, haddii aan ka shaqeyneyno mashruuceena gaarka ah waxaan sameynaa:
//removes all ssh entries from the ssh-agent $ ssh-add ~/.ssh/id_rsa_personal
// Adds the personal ssh key
Sidoo kale, haddii aan ka shaqeyneyno mashruuca macmiilkayaga, waxaan sameynaa:
//removes all ssh entries from the ssh-agent $ ssh-add ~/.ssh/id_rsa_company
// Adds the company ssh key
Tanina waa sida aan ugu maamuli karno xisaabaadyo badan oo GitHub isla mashiinka ah isla markaana aan u kala beddeleyno iyaga oo ka shaqeynaya mashaariic kala duwan.
horusocod waa nooc ka mid ah tijaabinta softiweerka ee la isticmaalo ka hor inta aan xitaa software la qorin.
la bixiyo marka markaa shuruudaha aqbalaadda
10 Astaamaha Kooxda Is-abaabulka Agile
Java Qor Si Aad u Xaraysato Tusaalooyinka
SDET Unicorns - Maxay ugu adagtahay in la kireysto SDETs?
Sida loo Isticmaalo Linux raadinta Amarka raadinta Faylasha
Cilmiga Jmeter: Sida Loogu Diro Faylka JSON Codsi ahaan Jirka
Raadinta iyo Sahaminta
Selenium Guji Xiriirinta By href Value
Maxaad u Dooneysaa inaad Awood u yeelato Imtixaan?
Aasaaska Tijaabinta Barnaamijka - Su'aalaha iyo Jawaabaha
Linux Tirtir Faylasha iyo Tusaha